Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Muxumed - Hoygamaansada
Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Muxumed
Fasalka labaad ee dugsiga sare ayuu ku jiray Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Muxumed markuu curiyay gabaygii ugu horeeyay. Maansadaasi magaceedu waxa uu ahaa “Qoraal”.
Maansadaas waxaa ku dhaliyay kadib marki ay dhagahiisa ka bateen casharro iyo qaacidooyiin ay sameeyeen dad ree galbeed ah. Kadibna wuxuu isweydiiyay maxaa loo wayay mufakariin Soomaali ah oo hal-abuur la imaada.
Abwaan Cabdirisaaq wuxuu ku noolyahay waxna ku bartay magaalada Hargeisa. Gabayadiisa badanaa wuxuu diiradda ku saaraa arrimaha bulshada, gaar ahaan dhalinyarada.
Sanadkii 2020-ka wuxuu ku guulaystay mid kamid ah afarta kaalmood ee u horreeya ee Tartanka suugaaneedka Hiil Hooyo.
All poems by Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Muxumed
Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Muxumed in media